Falastiiniyiinta Oo Dhigaya Dibad Bax
Home WARARKA Falastiiniyiinta Oo Dhigaya Dibad Bax
Hargaysa(Aftahannews)-Shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool deegaanada la haysto ee Daanta Galbeed iyo Qaza ayaa billaabay isu soo baxyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay noqoto caasimadda Israa’iil.
Dadkan ayaa ka cadheysan go’aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa’iil.
Go’aanka Trump oo isbedel wayn ku ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee tobannaanka sano soo jirtay waxaa laga bixiyay jawaabo cadho leh oo caalamka oo dhan ka timi.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in shaacintan ay soo celiso qalalaasii xumaa ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa’iil. Ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub.
Falastiiniyiinta ku nool koofurta marinka Qasa oo hadalkaas aad uga cadhaysan ayaa gubay sawirka Mr Trump, kan ra’iisul wasaaraha Israa’iil iyo calanka Yuhuudda.
Faransiiska: Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yidhi ”Ma taageersanin go’aankan oo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah waana mid shaleyto mudan”.
Paksitan: Dowldda Pakistan ayaa tidhi ”waxaa shallayto mudan in Trump uu iska dhaga tiray baaqyadii caalamka oo dhan uga imaanayay”.
Salaasadii ayaa diblomaasiyiinta Maraykanka iyo ee Israa’iil iyo qoysaskooda waxaa lagula taliyey in aysan u socdaalin qaybta qadiimiga ah ee Quddus iyo daanta galbeed “ilaa iyo amar dambe”.
Sida uu dhigayo heshiiskii nabadda ee Israa’iil iyo Falastiin ee 1993, marxaladda magaalada Qudus waxay ahayd in looga doodo kulamadii ka dambeeyay midkii lagu saxeexay heshiiskaasi.
Previous articleMadaxweynaha Cusub ee Somaliland oo La Kulmay Diblumaasiyiin Ka Socda Midowga Yurub, Turkiga iyo UN-ta
Next articlefirst modern Somali women singer died in Hargeisa